ပန်းနာရင်ကျပ် သတိချပ် - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 17, 2020 Buntita Bamrungchaowkasem, M.D. Wasa Anupant, M.D.
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဆိုတာ ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းမှု နာတာရှည်ဖြစ် နေတာကို ခေါ်ပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ ၁၀-၁၅% ဟာ ပန်းနာရင်ကြပ်ခြင်းကို ခံစားနေကြရပြီး ဖြစ်တဲ့ အရေအတွက်ဟာလည်း တိုးတက်လျက်ရှိပါတယ်။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသည်တွေဟာ ဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါရဲ့ အတိမ်အနက်နဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှု ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေဖို့ သူတို့ရဲ့ အဆုတ် အလုပ်လုပ်နေပုံကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရင်ကျပ်နေပြီဆိုရင် ဆေးရုံကို အမြန်ခေါ်သွားပြီး လိုအပ်တဲ့ ကုသမှုတွေ ချက်ချင်းပေးနိုင်ဖို့ အလွန် အရေးကြီး ပါတယ်။ ရင်ကျပ်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဟာ အသက်အန္တရာယ်အထိ ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ ရောဂါဝေဒနာတစ်ခု ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဆိုတာ ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းမှု နာတာရှည်ဖြစ်နေတာကို ခေါ်ပါတယ်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ bronchial hyperresponsiveness (အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းကိုကျဉ်းသွားအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့ အာရုံခံနိုင်စွမ်းတွေ မြင့်နေတာ)၊ bronchospasms (ပြင်ပက လှုံ့ဆော်မှု တစ်ခုခုကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းက ကြွက်သားတွေ အလိုလို ကျဉ်းသွားတာ)၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုက ကျဉ်းနေတာ စတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ရင်ကျပ်တာဟာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ နူးညံ့တဲ့ ကြွက်သားတွေ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ကျုံ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဝေဒနာရှင်ဟာ တစ်ခါတစ်လေ သူရင်ကျပ်နေမှန်း အသက်ရှူမဝဖြစ်နေမှန်းတောင် မသိနိုင်ဘဲ သာမန်လူတွေလိုပဲ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လုပ်နိုင်နေပါတယ်။ ဒီလို လက္ခဏာမပြတဲ့ ဝေဒနာရှင်တွေမှာ ရင်ကျပ်တဲ့ရောဂါ ရှိ/မရှိ ဆရာဝန်တွေတာင် မစမ်းသပ်ဘဲ တပ်အပ် မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရောဂါအခြေအနေ အမှန်ကို သိနိုင်စေဖို့ လူနာရဲ့ ရောဂါရာဇဝင်ကို သေသေချာချာ ဆန်းစစ်ဖို့နဲ့ လူနာကို သေသေချာချာ စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ရင်ကျပ်နေတဲ့မှာ တွေ့ရတဲ့ လက္ခဏာတွေ
ပန်းနာရင်ကျပ် ဘယ်က စ
ကလေးငယ်လေးတွေ ရင်ကျပ်တာကို စမ်းသပ်ဖို့ အရင်ကမရှိခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေ
၂၀၁၃ JCI USA က အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ မွေးကင်းစကလေးငယ်ရင်ကျပ်ရောဂါကုသမှုများ
မျိုးရိုး – မိဘတွေနဲ့ မောင်နှမတွေမှာ ရင်ကျပ်ရောဂါရှိလို့ရှိရင် ကလေးတွေမှာလည်း ရင်ကျပ်ရောဂါ ပါလာနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင် – ရင်ကျပ်သွားစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တဲ့ အိမ်မှာ ဖုန်ထူတာ၊ ခွေးတွေ ကြောင်တွေရဲ့ အမွေးတွေ၊ ပိုးဟပ်၊ အိမ်ထဲမှာ ဆေးလိပ်သောက်တာ စတဲ့ မိမိရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လဲ ရင်ကြပ်တတ်ပါတယ်။
ရင်ကျပ်နေတဲ့လူမှာ တွေ့ရတဲ့ လက္ခဏာတွေ
ချောင်းခြောက် မကြာခဏဆိုးပြီး သလိပ် ဖြူဖြူတွေ ဟပ် ထုတ်တတ်ပါတယ်။
ကျပ်နေတဲ့အချိန်မှာ အသက်ရှူသံ တရွှီရွှီကို ကြားနေရပါတယ်။
ရင်ထဲမှာ တင်းကျပ် နေတတ်ပါတယ်။
အသက်ရှူလို့မရခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းနဲ့ အသက်ကို အငမ်းမရရှူနေရခြင်းတို့ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ဖော်ပြပါ လက္ခဏာတွေဟာ ညပိုင်းနဲ့ မနက်အစောပိုင်းတွေမှာ အဖြစ်များတတ်ပါတယ်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေ ဖြစ်နေတဲ့အခါ၊ ကူးစက်ခံရတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
ပန်းနာထလာဖို့ သူများထက်ပိုပြီး လွယ်ကူတဲ့ ရင်ကျပ်ဝေဒနာရှင်တွေဟာ သူတို့ အလာဂျီဖြစ်တဲ့ဟာ တစ်ခုခုနဲ့ တွေ့လိုက်ရပြီဆိုတာနဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဟာ တင်းပြီး ကျုံ့သွားတဲ့အတွက် ကျဉ်းမြောင်းလာပါတယ်။ အဲဒီနောက် ချောင်းတွေဆိုးလာတာ၊ အသက်ရှူကျပ်လာတာနဲ့ အသက်ရှူရင် တရွှီရွှီ မြည်လာတော့တာပါပဲ။
အသက်ရှူမရ၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း နဲ့ အသက်ရှူစဉ် ရွှီး ရွှီး မြည်ခြင်းတို့ဟာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း ကြောင့် ဖြစ်လာရတဲ့ အကျိုးဆက်များပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်က ကြွက်သားတွေ မကြာခဏ ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်ရတာကနေ အသက်ရှူပေါက်ပိတ်ခြင်းကို ဦးတည်နေပါတယ်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ တစ်သျှူးတွေဟာ ရောင်ရမ်းပြီး စေးကပ်လာကြတာကြောင့် အဆုတ်ဟာ သူ့ရဲ့ လုပ်ငန်းကို အပြည့်အဝ မဆောင်ရွက်နိုင်တော့တဲ့အတွက် ပန်းနာဝေဒနာရှင်ဟာ ပုံမှန်လူတွေထက်ပိုပြီး လေ ကို ငတ် လာတဲ့ပြီး အသက်ကို အငမ်းမရ ရှူကြရရှာပါတယ်။
တစ်ချို့လူနာတွေမှာ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းနဲ့ တရွှီးရွှီး မြည်ခြင်းတို့ဟာ အလိုအလျောက် ပြန်ကောင်းသွားတဲ့အခါမျိုး ရှိသလို အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ချဲ့ပေးတဲ့ ဆေးမျိုး ပေးလိုက်ရတဲ့အခါမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ လေရှူလမ်းကြောင်း တအားပိတ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာ လူနာဟာ အသက်ရှူကြပ်တဲ့ ဝေဒနာကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လေရှူရှိုက်နိုင်မှုဟာ အကန့်အသတ်နဲ့ဖြစ်သွားခြင်း၊ အသက်ရှူနိုင်စွမ်းမရှိတော့ခြင်း၊ အောက်ဆီဂျင် ပြတ်သွားခြင်း စတာတွေ ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ဆေးရုံတင်ထားရခြင်း၊ အရေးပေါ်အခန်းမှာကုသပေးရခြင်း စတဲ့ ထိရောက်တဲ့ ကုသမှုကို အချိန်မီ မခံယူရင် အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်တဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ပန်းနာရင်ကြပ်ရှိတဲ့ ကလေး ၃ ယောက်မှာ ၂ ယောက်ဟာ အခြားဓာတ်မတည့်မှုများကြောင့်လည်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုကလေးမှာ နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ လက္ခဏာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရပြီဆိုရင် အသက်ရှူရ ခက်ခဲတဲ့ ပြဿနာဟာလည်း ပိုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ အဲဒီ နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းပြဿနာကို သေသေချာချာ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ရင် သူတို့မှာ ပန်းနာရင်ကျပ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ အသက်ရှူရခက်ခဲမှုကိုလည်း အများကြီး လျှော့ချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်ရှူမိခြင်း၊ ခွေးတွေ ကြောင်တွေရဲ့ အမွေးတွေ၊ ပိုးဟပ်၊ ပန်းဝန်မှုန် စတာတွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုများ
အေးတဲ့ ရာသီဥတု၊ ခြောက်သွေ့တဲ့လေ စတဲ့ ရာသီအပြောင်းအလဲများကြောင့်
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ အလွန်အမင်း ရယ်မောမိခြင်း
စိတ်ခံစားမှု ခဏခဏပြောင်းလဲတတ်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း
အက်စပရင်၊ NSAID (စတီးရွိုက်မပါသော အဆစ်ရောင်ကုသဆေးများ)၊ beta-blockers စတဲ့ သွေးတိုးကျဆေးများ စတာတွေ သောက်နေရသူများ
ကလေးငယ် ရင်ကျပ်တာကို စမ်းသပ်ဖို့ အရင်က မရှိခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေ
ပန်းနာရင်ကျပ် ဖြစ်ပွားမှုဟာ ကလေးတွေမှာ ဆက်တိုက်တိုးပွားလျက်ရှိနေပါတယ်။ ချောင်းဆိုခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း၊ တရွှီးရွှီ အသံမြည်နေခြင်း၊ ရင်ထဲမှာ တင်းကျပ်နေခြင်း စတာတွေကို ခံစားနေကြရပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေဟာ ရောဂါရှာတဲ့နေရာမှာ လူနာရဲ့ ရောဂါရာဇဝင်အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပြီး ရှာနေကြရပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးကို စစ်ဆေးတာ၊ ဓာတ်မတည့်မှု စစ်ဆေးတာ၊ အဆုတ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို စစ်ကြည့်တာ စတာတွေ ကိုလည်း လုပ်ကြပါတယ်။ peak flow meter လို့ ခေါ်တဲ့ အဆုတ်ရဲ့ လေမှုတ်အားကို စမ်းတဲ့ ကိရိယာလေးနဲ့ မှုတ်ကြည့် ခိုင်းပြီး စမ်းသပ်တာမျိုးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းလမ်းတွေအားလုံးဟာ လူနာက လိုက်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိမှ လုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အငယ်ဆုံး ၆ နှစ်နဲ့ အထက်ကို မှ လုပ်လို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကလေးပေါက်စလေးတွေမှာ ကျတော့ spirometry လို peak flow meter လိုဟာမျိုးနဲ့ မှုတ်ခိုင်းပြီး တိုင်းကြည့်လို့ မရနိုင်တဲ့အတွက် အောက်ပါ အခြားစမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများကို ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ထားရပါတယ်။
၁. Forced oscillation technique (FOT) နည်းလမ်းဖြင့် လေမှုတ်နိုင်စွမ်းကို စစ်ဆေးခြင်း
ဒီနည်းကတော့ လေလမ်းကြောင်းရဲ့ ခုခံနိုင်စွမ်းအားကို စစ်ဆေးတဲ့နည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရှိသူတွေရဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းခုခံနိုင်အားဟာ ရိုးရိုးသာမာန်လူတွေထက် အထက်ပိုင်းနဲ့ အောက်ပိုင်းမှာ ပိုမြင့်မားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကလေးကို ပုံမှန်အသက်ရှူသွင်းခိုင်းပြီး ကိရိယာလေးတစ်ခုထဲကို အားပြင်းပြင်းနဲ့ မှုတ်ထည့် ခိုင်းတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ကြိမ် အပြည့်အစုံလုပ်နိုင်ဖို့ စက္ကန့် ၂၀ သာ ကြာမြင့်ပြီး ရိုးရှင်းကာ အဆင်ပြေပါတယ်။ အသက် ၃ နှစ်နဲ့ အထက် ကလေးတွေမှာ စတင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ရင်ကျပ်ရောဂါ ရှိမရှိ သံသယ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ကလေးများအတွက် ရောဂါလက္ခဏာကနဦးစမ်းသပ်မှုအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း မှတ်တမ်းများအရ သိရှိရပါတယ်။
၁. လေမှုတ်ထုတ်ရာတွင် နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုက် ပါဝင်မှုကို စစ်ဆေးခြင်း
ဒါကတော့ လူကြီးရော ကလေးများမှာပါ အသက်ရှူထုတ်လိုက်ရာမှာ ပါဝင်လာတဲ့ နိုင်ထရစ်အောက်ဆိုက် ပြင်းအားကို တိုင်းတာတဲ့ ကိရိယာနဲ့ စစ်ဆေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်မှု နဲ့ ရင်ကျပ်နေတဲ့ လူနာတွေ ရှူထုတ်လိုက်တဲ့ လေထဲမှာ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုက် ပါဝင်မှုနှုန်းကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့် အတွင်းက အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမျာ ရောင်ရမ်းနေတဲ့ အတိုင်းအတာကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ကလေးဘဝအစောပိုင်း ရင်ကျပ်ရောဂါရှာဖွေမှုနဲ့ ကော်တီကိုစတီးရွိုက်စတဲ့ ရှူဆေးများနဲ့ ကုသမှုအပြီး ရောဂါကို စောင့်ကြည့်ရာမှာ အထောက်အကူပြုဖို့ သုံးတဲ့ နည်းလမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကလည်း ရိုးရှင်းပြီး အဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက် အသက် ၃ နှစ်နဲ့ အထက်ကလေးငယ်များအတွက် အသုံးပြုဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။
ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသက်ရှူနှုန်း၊ တရွှီးရွှီးမြည်မှု စတာတွေ ဖြစ်လိုက် ပေျာက်လိုက် ဖြစ်နေသလား၊ ညဘက်အိပ်ချိန်မှာ ချောင်းပိုဆိုးသလား၊ တခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေများ ကူးစက်ထားသေးလား စတဲ့ ရောဂါရာဇဝင်ကို စစ်မေးခြင်း၊
အသက်ရှူသံကို နားထောင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတောင့်တင်းနေမှု၊ အဆုတ်နှစ်ဖက်စလုံးက တရွှီးရွှီးမြည်သံကို နားထောင်ကြည့်ခြင်း စတဲ့ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ကြည့်ခြင်း။
လူနာဟာ ဘယ်အရာတွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်တာလဲ။ ဘယ်လိုဟာတွေကြောင့် ရင်ကျပ်လာတာလဲ စတာတွေကို ဓာတ်မတည့်မှုစမ်းသပ်ခြင်း နဲ့ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ကိုယ်နဲ့ ဓာတ်မတည့်တဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို သိရှိပြီး ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
၆ နှစ် နဲ့ အထက်ကလေးတွေက စပြီး အသက်ရှူတဲ့ ပမာဏ နဲ့ ပြင်းအားကို တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဟာ တင်းပြီး ကျပ်နေမယ်ဆိုရင် ရှူထုတ်လိုက်တဲ့ ပြင်းအားမှာ အားနည်းနေ နိုင်ပါတယ်။ အသက်ရှူမှုဆိုင်ရာမှာ အဟန့်အတားတစ်ခုခု ရှိနေပြီ ဒါမှမဟုတ် အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဟာ ကျပ်နေပြီဆိုရင် အသက်ရှူရပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး အဆုတ်ထဲက ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေကာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုချဲ့ပေးနိုင်တဲ့ bronchodilator inhaler ရှူဆေးမျိုးကို ပေးထားပြီး ရှူထုတ်လိုက်တဲ့ လေရဲ့ ပြင်းအားကို စောင့်ကြည့်ခြင်း လုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ တိုင်းတာလို့ ရရှိတဲ့ ပြင်းအားဟာ ၁၂% တိုးတက်လာတယ်ဆိုရင် ဒီလူနာမှာ ရင်ကျပ်ရောဂါ ရှိနေပြီလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
ပန်းနာရင်ကျပ်ဝေဒနာရှင်တိုင်း အသက်ရှူပြင်းအားတိုင်းတာခြင်းကို ပြုလုပ်သင့်ကြပါတယ်။ ဒါမှ ရင်ကျပ်ရောဂါ တစ်ကယ်ရှိမရှိ သိနိုင်မှု ဖြစ်တဲ့အပြင် ရှိနေပြီဆိုရင်လည်း ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ ကျပ်နေတာလဲဆိုတာကို သတ်မှတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆုတ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို တိုင်းတဲ့ Peak Flow Meter ဆိုရင် ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး လူနာကိုယ်တိုင် အိမ်မှာ တိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ လေကို ဘယ်လောက်အားနဲ့ မှုတ်ထုတ်နိုင်သလဲဆိုတာကို တိုင်းတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရင် ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ ကျပ် နေသလဲဆိုတာကိုပါ အမြန်သိနိုင်တဲ့ နည်းကလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရဲ့ တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းကိုတော့ Bronchial Provocation Test နဲ့ တိုင်းတာရပါတယ်။ ဒါကတော့ ရင်ကျပ်နေပေမယ့် အဆုတ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာ ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့ လူနာမျိုးအတွက် သုံးပါတယ်။
ဒီစမ်းသပ်နည်းနဲ့ စမ်းမယ်ဆိုရင် အသက်ရှူအားစမ်းတဲ့ Spirometry test ကို အရင်တိုင်းရပါမယ်။ အဲဒီနောက် Methacholine ကဲ့သို့သော လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ ဆေးတစ်မျိုးကိ ရှူသွင်းခိုင်းပြီး Spirometry ပြန်တိုင်းရပါမယ်။ တကယ်လို့ ရှူထုတ်တဲ့အားဟာ ၂၀% အောက်အထိ ကျမသွားဘူးဆိုရင် Methacholine ကို နောက်တစ်ဆင့် တက် ပေးရပါတယ်။ ၂၀% ကျသွားတဲ့အထိ ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်ရပါမယ်။ ဆရာဝန်က တိုင်းတာရရှိမှုကို ဂရပ်ဖ်ဆွဲပြပါလိမ့်မယ်။
ရင်ကျပ်ခြင်းနဲ့ အလားတူ အခြားရောဂါများ ရှိမရှိ ဆိုတာကတော့ ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်။
အရင်တုန်းကတော့ ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေဘာတွေကို မဖော်ထုတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက် ပန်းနာရင်ကျပ်ကို ပေျာက်အောင် ကုမပေးနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ အသက်ရှူရလွယ်ကူစေတဲ့ ဆေးလေးပဲ ပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ခုတော့ ရင်ကျပ်ပန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေ အများကြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ကုသမှုပေးတဲ့ ကုထုံး တွေဟာလည်း အရင်ကထက်အများကြီး အဆင့်မြင့်လာပြီး အမြစ်ပြတ်သွားတဲ့အထိတောင် ကုပေးနိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
လူနာရော လူနာကို ပြုစုစောင့်ရှောက်မယ့်သူအားလုံးပါ ဒီ ရင်ကျပ်ပန်းနာရောဂါနဲ့ သူ့ ဆေးတွေရဲ့ သဘောသဘာဝကို နားလည် သဘောပေါက်အောင် လုပ်ထားရပါမယ်။ ကုသတဲ့နေရာမှာလည်း နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်သမားတော်နဲ့ အတူတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရပါမယ်။
လူနာဟာ ပန်းနာထစေတဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုများဖြစ်တဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေရှူမိခြင်း၊ အိမ်မွေးခွေးလေး ကြောင်လေးတွေရဲ့ အမွေးတွေ၊ အိမ်ထဲမှာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်ငွေ့ရှူနေရခြင်း စတာတွေကို ရှောင်ရှားရပါမယ်။
လူနာဟာ ရင်ကျပ်ပန်းနာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါဆိုင်ရာအကဲဖြတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ အဆုတ်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှတွေကို စစ်ဆေးခြင်း စတဲ့ အလုပ်တွေကိုလည်း သဘောပေါက်ထားရမှာဖြစ်ပြီး ဆက်တိုက် စစ်ဆေးနေဖို့ လိုတယ် ဆိုတာကိုလည်း သိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မှာ peak flow meter ဆောင်ထားတယ် ရှိတယ် ဆိုရင်လဲ ကိုယ့်အခြေအနေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် တိုင်းကြည့်နေလို့ရပါတယ်။
ရင်ကျပ်ပန်းနာဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၂ မျိုး ရှိပါတယ်။
ရင်ကျပ်ကျပ် မကျပ်ကျပ် အစဉ်အမြဲ စွဲ သောက်နေရမယ့် ထိန်းချုပ်ဆေးမျိုး – သူက ရင်ကျပ်မလာအောင် ထိန်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်တီကိုစတီးရွိုက်ပါတဲ့ ရှူဆေး (အင်ဟေလာ) ဟာ ရင်ကျပ်ရောဂါကို ကုသတဲ့ အဓိက ဆေးတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပမာဏနည်းနည်းကိုပဲ အသုံးပြုဖို့ လိုတဲ့အတွက် ဘေးအန္တရာယ် အကင်းဆုံးလို့လည်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ လည်ချောင်းတွေ ခြောက်သွေ့တာ၊ ပါးစပ်နဲ့လျှာတွေမှာ မှိုတက်သလိုမျိုး ဖြူဖြူအဖတ်တွေ ကပ်နေတာ၊ အသံ ပြာတာတာဖြစ်လာတာ စတဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးလေး တွေတော့ ရှိတတ်ပါတယ်။ ရှူဆေးရှူပြီးရင် ပါးစပ်ကို ရေသန့်သန့်နဲ့ ဆေးပစ်တာ၊ အာလုပ်ကျင်း ပစ်တာ စတာတွေ လုပ်ပေးလိုက်ရင် ရပါတယ်။ ဆေးရှူတာဟာ ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိပေမယ့် ဆေးသောက်တာ ဆေးထိုးထားထက်စာရင် ပိုမို ဘေးကင်းတာမို့ ဒီနည်းကို အများဆုံးဦးစားပေး ကုသကြပါတယ်။
သက်သာစေတဲ့ဆေးတွေကတော့ ကျပ်လာမှ သောက်ရတာ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ကတုန်ကရင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ ခြေတွေ လက်တွေ တုန်ခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှူဆေး ရှူသွင်းခြင်းကတော့ အထိရောက်ဆုံး ကုထုံးဖြစ်ပြီး ဖြစ်နေတဲ့နေရာကို တိုက်ရိုက် ရောက်ရှိပါတယ်။ ပမာဏ နည်းနည်းလေးနဲ့တင် ထိရောက်မှု ကောင်းမွန်ပါတယ်။ သောက်ဆေးထက်ပိုပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး နည်းပါတယ်။ ခုခုနလာလာဆယ်တော့ ပန်းနာရင်ကျပ်ကုရာမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ရှူဆေး အင်ဟေလာ တွေကိုပဲ အဓိက အများဆုံး သုံးပြီး ကုသပေးနေကြပါတယ်။
၂၀၁၂ JCI USA က အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ မွေးကင်းစကလေးငယ် ရင်ကျပ်ရောဂါ ကုသမှုများ
ထိုင်းနိုင်ငံ ဆစ်မီတဝေးဆေးရုံကြီးဟာ CCPC လို့ ခေါ်တဲ့ ကလေးသူငယ်ရင်ကျပ်ပန်းနာကုသမှု အစီအစဉ်မှာ Joint Commission International (JCI), U.S.A. ရဲ့ အသိအမှတ်ပြုထောက်ခံမှုကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်ကတည်းက နှစ်စဉ် ဆက်တိုက် ရရှိနေတာ ဖြစ်လို့ ရင်ကျပ်နေတဲ့ ကလေးငယ်တိုင်းအတွက် ဆစ်မီတဝေ့ရဲ့ အဆင့်မြင့် အရည်အသွေးမြင့် ကုသမှုတွေအပေါ်မှာ စိတ်ချ ယုံကြည်စွာ အားကိုးနိုင်ပါတယ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထူးကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ ရင်ကျပ်ပန်းနာနဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုကုသရေးဆိုင်ရာ ကလေးအထူးကုတွေ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါကုသမှုလုပ်ငန်းများမှာ ကလေးအထူးကုများနဲ့ အတူတကွ လက်တွဲဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ အတွေ့အကြုံရင့် ကျွမ်းကျင်သူတွေ အားလုံး စုပေါင်းပြီးတော့ ကလေးတစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် ထိရောက်တဲ့ ကုသမှု အစီအစဉ် တွေကို ချမှတ်ပေးလျက် ရှိကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့ ၇နှစ်အတွင်း နှစ်စဉ် တတိယသုံးလပတ်ဖြစ်တဲ့ ဇူလိုက်ကနေ စက်တင်ဘာ အတွင်းမှာ ဆစ်မီတဝေ့ ကလေးဆေးရုံကြီးမှ ကြီးမှူးပြီး ပန်းနာရင်ကျပ်ဝေဒနာရှင်တွေနဲ့ မိသားစုတွေ၊ အခြားစိတ်ဝင်စားသူတွေ ပါဝင်တဲ့ “Asthma Camp” လုပ်ပြီး ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေ အတူတကွ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီလှုပ်ရှားမှုမှာ ပန်းနာရင်ကျပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သိကောင်းစရာတွေ၊ နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ဝေမှုတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိမှုတွေကနေ ရှောင်ရှားပုံတွေ၊ ရှူဆေးကို အိမ်မှာ အထိရောက်ဆုံး ဖြစ်အောင် ဘယ်လို သုံးရမလဲဆိုတဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ အဆုတ်နဲ့ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းတွေ စတာတွ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ လုပ်ဆာင်မှုတွေဟာ ကုသမှုလုပ်ငန်းတွေကို များစွာ အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ Asthma Attack လို့ခေါ်တဲ့ ပန်းနာရင်ကျပ်ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို မခံရစေဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာ ကို ကလေးသူငယ် ရင်ကျပ်ပန်းနာကာကွယ်ကုသရေးဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးတွေ့ရှိထားတဲ့ နည်းလမ်းအချက်အလက်တွေကို အသုံးပြုပြီးတော့လည်း လေ့ကျင့်ပေးပါသေးတယ်။ တစ်ချို့ စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
The Asthma E-Care program: Asthma E-Care က ရင်ကျပ်ပန်းနာကုသမှုတွေ ပါဝင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူနာကိုယ်တိုင် ဒီ website ကို login ဝင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆော့ဖ်ဝဲမှာ ကိုယ့်အတွက် ကုသမှု အစီအစဉ်တွေ၊ ဆရာဝန်ရက်ချိန်းယူတာတွေ၊ ဆေးဘယ်အချိန်သောက်ရမလဲ ဆိုတာတွေ၊ စတာတွေ လုပ်လို့ ရပါတယ်။​ အင်ဟေလာရှူတဲ့ အချိန်တွေကို မှတ်တမ်းတင်တာတွေ၊ အိမ်မှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် peak flow meter တိုင်းကြည့်လို့ ရတဲ့ အဖြေတွေကို မှတ်ထားနိုင်တာတွေ စတာတွေလည်း လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ဆရာဝန်တဲ့ ၂၄ နာရီပတ်လုံး အချိန်မရွေးဆွေးနွေးနိုင်ပြီး အင်ဟေလာရှူတဲ့နည်း စတဲ့ ဗီဒီယိုကလစ်တွေ ကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးထားမှုတွေက ကုသရေးဆိုင်ရာမှာ များစွာ အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး ဆရာဝန်တွေဘက်ကလည်း လူနာကို အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒီ ဆော့ဖ်ဝဲကတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် မေးမြန်းနိုင်ပါ သေးတယ်။ လူနာအခြေအနေ၊ ပေးထားတဲ့ဆေးတွေ မှန်မှန် သောက်မသောက်၊ အရေးကြီးတဲ့ ဆေးတွေ သောက်တာ ပမာဏမှန်ရဲ့လား စတာတွေကို စစ်ဆေးနိုင်တဲ့အတွက် ဒီဆော့ဖ်ဝဲဟာ ရင်ကျပ်ပန်းနာကုသရေးမှာ အထူး အထောက်အကူ ပြုပေးပါတယ်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲကတော့ ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံရဲ့ ကလေးရင်ကျပ်လူနာများ သီးသန့် အသုံးပြုဖို့ ထုတ်လုပ်ထားပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂. ရှူဆေးရှူဖို့လိုအပ်တဲ့ ကလေးရင်ကျပ်လူနာတွေအတွက် ရှူဆေးခန်း nebulization room ကိုလည်း သီးသန့် နေရာပေး ထားရှိပေးထားပါတယ်။ ဆေးရှူရမယ် ကလေးတွေ စိတ်ပျော်ရွှင်ရအောင် ကာတွန်းကာရိုက်တာလေးတွေနဲ့ လည်း ဒီဇိုင်းဖော်ပေးထားပါသေးတယ်။ ဒါမှလည်း ကလေးတွေ ဟာ ဆေးရုံကြောက်တဲ့စိတ်တွေ နည်းပါးသွားပြီး ထိရောက်တဲ့ ဆေးရှူတဲ့ကုသမှုကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ခံယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နီဗျူလိုင်ဇာဆေးရှူခန်းအပြင် အခြား ကုသရေးဆိုင်ရာ အခန်း ၂ ခန်းလဲ ရှိပါသေးတယ်။
လေမှုတ်ထုတ်ရာတွင် နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုက် ပါဝင်မှုကို စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ ကုသတဲ့ အခန်း နဲ့
(FOT) နည်းလမ်းဖြင့် လေမှုတ်နိုင်စွမ်းကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ကုသတဲ့ အခန်း တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၃. AR Application ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ကလေးတွေအတွက် ရင်ကျပ်ပန်းနာစစ်ဆေးမှုနဲ့ ဓာတ်မတည့်မှု စစ်ဆေးဖို့အတွက် ကလေးတို့အကြိုက် ဖန်တီးထားတဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ ဂိမ်းကလေးများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးရော မိဘများပါအတူကစားနိုင်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ ရင်ကျပ်နေမှုအခြေအနေကိုသိဖို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဂိမ်းကစားရင်း စမ်းသပ်နိုင်တာမို့လို့ အထူးအသုံးဝင်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ ရင်ကျပ်ပန်းနာ၊ ကလေးရင်ကျပ်ပန်းနာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ သိကောင်းစရာများနဲ့ ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံကြီးရဲ့ ကလေးရင်ကျပ်ပန်းနာ ကုသမှုများဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်နေမှုများကို သိရှိစေဖို့ ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းနာရင်ကျပ် သတိချပ် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဆိုတာ ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းမှု နာတာရှည်ဖြစ်နေတာကို ခေါ်ပါတယ်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ bronchial hyperresponsiveness (အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းကိုကျဉ်းသွားအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့ အာရုံခံနိုင်စွမ်းတွေ မြင့်နေတာ)
User rating:4out of5with 12 ratings